केकीलाई कसले बनायो हङकङमा एक्लो ? « Ramailo छ
केकीलाई कसले बनायो हङकङमा एक्लो ?
बादल लिम्बुको संगीत र भद्रकला आङबुङको शब्दमा ‘एक्लोपन’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायक स्वरुपराज आचार्य र गायिका प्रविशा अधिकारीको स्वर छ । सुवास गुरुङ निर्देशित भिडियोमा नायिका केकी अधिकारीको साथमा ओम प्रकाश राई र विकास लिम्बु फिचरिङ छन् । गीतको भिडियो यस्तो बनेको छ :